MACLUUMAADKII HORE IYO SAWIRRO EYDA EYDA INGIRIISIGA AH EE SHEEPDOG DOG - EEYAHA
Macluumaadkii Hore iyo Sawirro eyda eyda Ingiriisiga ah ee Sheepdog Dog
Xilliga xagaaga ee Sheepdog Ingiriiskii Hore oo ay jaakadkeedu u gaaban yahay
Liistada eeyaha Ingiriisiga ah ee 'Sheepdog Mix Breed Dogs'
Odaygii Ingiriis Shepherd Dog
ohld ING-glish Ido-dawg
The Old English Sheepdog waa eey adag, is haysta, oo laba jibbaaran. Khadka kore ayaa ka hooseeya garbaha, una fooraraya xagga dambe xagga dambe. Laabta ayaa qoto dheer oo ballaadhan. Madaxa ayaa weyn oo leh joogsi si fiican loo qeexay. Sanku waa madowyahay. Ilkaha waxay ku kulmaan heer ama qaniinyada maqasku. Indhuhu waxay ku yimaadaan bunni, buluug ama midab kasta. Dhegaha dhexdhexaadka ah ayaa si siman loogu qaadaa madaxa. Lugaha hore waa kuwo aad u toosan lugaha gadaalna waa kuwo wareegsan oo muruq leh. Cagaha yaryari si toos ah ayey u tilmaamayaan waxayna u wareegsan yihiin suulasho si wanaagsan u leh. The Old English Sheepdog midkoodna wuxuu ku dhashay bilaa cirib (sida magaca Bobtail ka muuqata) ama gabi ahaanba waa la gooyey. Xusuusin: waa sharci daro in dabada la dhigo meelo badan oo Yurub ah. Jaakada, jaakad laba jibbaaran waa mid dheer oo cufan lehna dhar adag oo adag oo adag oo adag, iyo jaakad jilicsan oo aan biyo lahayn. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah cawl, camiraad, buluug, buluug cawl, meer buluug, cawl leh calaamado cad ama cadaan leh calaamado cawl.
The Old English Sheepdog waa mid deggan oo faraxsan-tag-nasiib. Waxay awood u leedahay inay si toos ah ula jaanqaadi karto xaalado kala duwan, waa jacayl iyo saaxiibtinimo. Daacadnimo, ilaalin iyo caqli badan, wuxuu sameeyaa wehel wanaagsan. Saaxiibtinimo iyo dabacsanaan, noocani wuxuu jecel yahay oo ku fiican yahay carruurta waana qayb ka mid ah qoyska. Waxay leeyihiin xoog leh dareen xoolo waxaana laga yaabaa inay isku dayaan inay dadka ku daaqaan iyagoo garaacaya, oo aan qashin siinaynin, waxayna u baahan yihiin in la baro inaadan dadka daaqin. Milicsan ama milkiileyaal dadban ama kuwa aan samayn xeerarka guriga cad hab ah eygu wuu fahmi karaa waxay sababi doontaa eeyga inuu noqdo mid xoog leh. Noocani wuxuu u baahan yahay adag, laakiin deggan , kalsooni iyo hoggaan joogto ah . The Old English Sheepdog waa shaqaale aad u fiican oo awood u leh inuu raaco amarrada, laakiin wuu iska indha tirayaa tilmaamaha haddii uu u maleeyo inay tahay maskax adag marka loo eego xubnaheeda xirmada aadanaha. Jilifka 'Old English Sheepdog' waxay u egtahay jalas jaban. Noocan ayaa weli ah eey u eg-sanado badan, da 'ahaanna waxay u muuqdaan inay si lama filaan ah ugu dhacaan.
lhasa apso chihuahua ey isku dar ah
Dhererka: Ragga 22 - 24 inji (56 - 61 cm) Dumarka 20 - 22 inji (51 cm)
Miisaanka: Ragga laga bilaabo 65 rodol (29 kg) Dheddigga laga bilaabo 60 rodol (27 kg)
Qaarkood waxay ku kori karaan in ka badan 100 rodol (45 kg)
Ku soo dhowaanshaha IMHA (Dhiig-baxa Dhiig-baxa Hemolytic Anemia), dysplasia sinta iyo indho-beelka indhaha. Qaar ka mid ah eeyaha dhaqda waxay wataan hiddo-wadaha MDR1 kaasoo ka dhigaya kuwo u nugul daroogada qaarkood oo haddii kale okay la siin karo eey kale, laakiin haddii lagu baaro hidda-wadahan wuu dili karaa.
The Old English Sheepdog waxay ku fiicnaan doontaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Eeyahaani waa kuwo si firfircoon gudaha ugu shaqeeya waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah.
Eeyadan waxaa loo sameeyay shaqo adag waxayna jecel yihiin socod wanaagsan. Waxay u baahan yihiin in lagu qaado a socod maalinle ah , orod ama orod. Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha.
xiisaha eey eey dibi Maraykanka
Qiyaastii 5 ilaa 12 eey
Koodhka jilicsan ee dhogorta leh wuxuu u baahan yahay daryeel joogto ah si uu ugu hayo xaaladdiisa sare. Illaa in la shanleeyo oo aan si cad loo xoqin ilaa cufnaanta, jaakad biyo-la’aan ah ugu yaraan seddex jeer usbuucii, way matoobi doontaa eeyga ayaa laga yaabaa inuu yeesho dhibaatooyin maqaarka ah, taasoo u nugleysa inuu ku soo dhoweeyo dulin. Si taxaddar leh u soo jiid wax kasta oo dhaldhalaal ah si aan maqaarka loogu xoqin. Miis qurxin ayaa shaqada oo dhan ka dhigaya mid fudud. Haddii eeyga aan la tusin, jaakadu si xirfadaysan mashiin ayey u jari kartaa labadii biloodba mar ama wixii la mid ah, qiyaastii hal inji oo dhan. Waagii hore eeyahaas waxaa lala xiiray adhi. Ku wareeji indhaha oo gadaal-dhamaadka maqas aan-lahayn. Noocani wuxuu daadiyaa sida bini-aadamka-maahan wax badan, laakiin qadar yar.
Waxaa jira aragtiyo kooban oo ku saabsan asalka Old English Sheepdog. Mid waa inuu la xiriiraa Poodle iyo Deerhound . Aragtiyaha kale waxay la xiriiraan kan Laaluush iyo Bergamasco , ama ka yimid Iskuduwaha Gawaarida Gawaarida leh iyo Ruushka Owtchar, oo ah timo jilicsan oo Ruush ah oo la keenay Boqortooyada Ingiriiska oo ay saaran yihiin maraakiibta Baltiga. The Old English Sheepdog waxaa ka soo saaray gobolada galbeedka England England beeralayda u baahday dhaqsiyaha, adhiga si fiican la isugu duway iyo darawalka lo'da si ay xoolahooda suuqa u geeyaan. Eeyaha ayaa si weyn looga isticmaalay aagagga beeraha. Beeraleyda waxay bilaabeen dhaqanka ah inay dabada ku xirtaan qarnigii 18-aad si ay u aqoonsadaan eeyaha loo shaqeyn jiray si ay u helaan cashuur dhaaf. Sababtaas awgeed ayaa eeyaha loo bixiyay naanaysta 'Bobtail.' Guga kasta, marka idaha la xiirayo, beeralaydu waxay kaloo xiiri jireen jubbadaha eeyaha si ay u sameeyaan dhar diirran iyo bustayaal. The Old English Sheepdog waxaa loo isticmaalay xoolo dhaqatada maxaa yeelay waxay si fiican ugu dulqaadataa cimilada qabow. Waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay Ingiriiska 1873 iyo AKC 1888. Qaar ka mid ah hibooyinkii Ingiriisigii Hore ee Sheepdog waxaa ka mid ah: dib u helidda, dhaqashada iyo ilaalinta.
'Toby waa Sheygii hore ee Ingiriisiga, oo halkan lagu muujiyey qiyaastii 9.5 sano jir. Isagu waa mid caqli badan, caqli badan oo adeecsan. Isagu waa jacaylka noloshayda. Sawirkaan Toby wuxuu leeyahay timo dhaadheer.
'Tani waa Toby oo timaha loo jaray sababo la xiriira fasax uu ku qaatay Union Pier, MI.'
Feer xadka collie mix puppy puppy
Kani waa Sir Winston Maxwell 7aad. Dhashay: May 1, 1997. Eeg sawirro dheeri ah oo Max iyo walaashiis Abby ah!
Lahaanshaha sawirka Caroline's Old English Sheepdogs
'Tani waa Sheepdog Ingiriisi Hore'. Sawirrada waxaa laga qaaday saaxiibadeed oo ka shaqeeya beerta ariga markii ay ahayd 9 bilood oo la iibiyey, halkaas oo Selina ay 'isku dayday' inay riyaha raaciso. Waa gabar doqon ah, waxayna leedahay laba xawaare, hurdo iyo boodbood! Had iyo jeer waxay leedahay dhoola cadeyn waana qof walba saaxiibkiis. Waxay gabi ahaanba jeceshahay biyaha, cabitaanka, ku dhajinta cagihiisa dhexdeeda, dhex dabaalanaysa iyo cabbitaanka inta ay dabbaalaneyso. Waxaan kula dhaqaaqayaa iyada waana mid ka mid ah waxyaabaha ay ugu jeceshahay in la sameeyo. Waxaan leeyahay Xudduud Collie sidoo kale, oo waxaan ugu yeeraa eeygeyga, iyo Selina odaygeyga weyn. Waxaan daawadaa Cesar Millan Waxaan haystaa xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee DVD waxaana akhriyay buuggiisii ​​ugu horreeyay. Wuxuu i baray inaan noqdo hogaamiye kooxeed. Waxaan adeegsaday farsamooyinkiisa si aan kor ugu qaado eeygaygii ugu horreeyay, iyo Selina sidoo kale. Anigu waxaan ahay hogaamiyaha baakadka, waana ogahay in tani ay eeydayda ka dhigayso mid ka fiican k-9s.
Selina the Old English Sheepdog oo ah cunug weyn oo jira 9 bilood
'Kani waa Sheepdoggii Hore ee Ingiriisiga (Bobtail) oo lagu magacaabo Barry qiyaastii 5 sano jir. Isagu waa eeyga ugu caqliga badan uguna caqliga badan adduunka. Waqti badan ayaan ku qaataa saaxiibkay. Wuxuu jecelyahay raacida gawaarida iyo ila socdo . Barry waa mid qaas ah noloshayda waxaanan ku jeclahay qalbigayga oo dhan.
Old English Sheepdog (bobtail) oo magaciisu yahay Barry qiyaastii 5 sano jir wuxuu aadayaa gaari raacid
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah 'Sheepdog' Ingiriisigii Hore
Sawiradii hore ee Sheepdog ee Ingiriisiga 1
Sawiradii hore ee Sheepdog ee Ingiriisiga 2
Sawiradii hore ee Sheepdog ee Ingiriiska 3
Eygii Hore ee Idaha Ingiriisiga: Sawirro guryo la ururin karo
waa maxay eyga chorkie
isku darka lhasa apso pomeranian ee iibka ah
gooryaan u eg timo
5 bilood jir retriever
midabada dachshund chocolate & cream
apso lhasa iyo isku dhafka poodle